आज कहाँ-कहाँ पर्दैछ पानी र हिमपात ? — Imandarmedia.com
आज कहाँ-कहाँ पर्दैछ पानी र हिमपात ?
काठमाडौँ । देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली र तराईका केही भूभागमा हुस्सु लागेको छ। देशका बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मंगलबार देशको पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ।
गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानहरूमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।
बुधबार देशको पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। देशको पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानहरूमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।
त्यस्तै बिहीबार देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश १ को पहाडी भू-भागको एक-दुई स्थानहरूमा छिटपुटदेखि हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।
तेस्तै, कोरोना भाइरस कोभिड–१९ विरुद्ध प्रयोग गरिने खोप अनुगमनका लागि गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सो प्रतिवेदन सोमबार स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडासमक्ष बुझाएको हो।
प्रतिवेदन पत्रकार सम्मेलनमार्फत मंगलबार सार्वजनिक गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले २० देखि २४ लाख खोप हराएको प्रतिक्रिया दिएपछि मन्त्रालयले खोप खोज्न समिति बनाएको थियो।
तर, समितिले सचिवले दाबी गरेजस्तो खोप नहराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘बाहिर नबोल्नु भनिएको छ’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘जे होस् बाहिर आएको जस्तो २४ लाख खोप हराएको देखिएन। त्यसैले हामीले खोप नहराएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएका छौँ।
धेरै स्थानबाट खोप लगाएकाहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेकाले तथ्यांकमा फरक परेको उनको भनाइ छ। समितिले सबै हिसाब मिलेको देखेको उनले बताए । समितिले खोपको विवरण अपडेट गर्न छुटेका सबै तथ्यांकलाई सकेसम्म अद्यावधिक गरेको छ।
समितिले खोपको तथ्यांकहरू अद्यावधिक गर्न बाँकी भएका स्थानहरूबाट तथ्यांक मागेर रिर्पोट बुझाएको छन्। अधिकारीहरूका अनुसार महामारीका कारणले धेरै स्थानबाट विवरण अपडेट भएको थिएन। बाँकी कुराहरू प्रतिवेदन सार्वजनिक नभई भन्न नमिल्ने उनले बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म चार करोड ६५ लाख ७० हजार सात सय २० मात्रा खोप प्राप्त भएको छ । यसमध्ये तीन करोड ५५ लाख ३१ हजार आठ सय ३३ मात्रा खोप प्रयोग भइसकेको छ।
यसमा पहिलो मात्रा खोप लगाउनेको संख्या एक करोड ८२ लाख ६१ हजार एक सय ६५ र दोस्रो मात्रा एक करोड ६५ लाख २५ हजार १५५ ले लगाएका छन् । यस्तै अतिरिक्त भनेर सात लाख ४५ हजार पाँच सय १३ मात्रा प्रयोग भएको छ।
खोप खरिदमा १६ अर्बभन्दा बढी खर्च: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना खोप खरिदमा १६ अर्ब ३७ करोड ९० लाख ५८ हजार ८० रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विश्व बैंक र एडिबीबाट १० अर्ब २९ करोड ४६ हजार ८० रुपैयाँको खोप खरिद भएको छ।
नेपाल सरकारले भने ६ अर्ब आठ करोड ९० लाख १२ हजार रुपैयाँको खोप र सिरिन्ज खरिद गरेको छ। सरकारले चीनबाट भेरोसेल र भारतबाट २० लाख कोभिसिल्ड मात्रै खरिद गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार एडिबीले चार अर्ब ९८ करोड ३० लाख १४ हजार एक सय ६० रुपैयाँको खोप खरिद गरेको छ।
यस्तै त्यसमा आवश्यक पर्ने सिरिन्ज सात करोड ३९ लाख ८५ हजार पाँच सय २० रुपैयाँको खरिद गरेको छ। विश्व बैंकले एक अर्ब २० करोड दुई लाख ४० हजार रुपैयाँको खोप र ४ अर्ब ३२ करोड आठ लाख ६ हजार चार सय रुपैयाँको सिरिन्ज खरिद गरेको छ।